ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ: လက်ရှိအစိုးရဟာ ပါတီစုံဒီမိုကရေစီ အမည်ခံ စစ်အာဏာရှင်စနစ်သာ ဖြစ်တယ်လို့ ၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေ ပြော
လက်ရှိအစိုးရဟာ ပါတီစုံဒီမိုကရေစီ အမည်ခံ စစ်အာဏာရှင်စနစ်သာ ဖြစ်တယ်လို့ ၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေ ပြော
Posted by ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ at 8:52 PM
ကြံ.ခိုင်ရေးပါတီဟာ သူတို.ရဲ. ခြင်္သေ. ပုံကို အားနာသင်.နေပါပြီ ။
၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲ ဟာ ဂုဏ်သိက္ခာ ရှိတဲ.ရွေးကောက်
ပွဲ ဖြစ်ဖို. လွှတ်တော်နဲ.အစိုးရအဖွဲ. မှာနေရာအများစုယူထား
တဲ. ကြံ.ခိုင်ရေးပါတီ နဲ. စစ်တပ်ရဲ. အပေါ်တာဝန်ရှိလာပါပြီ။
၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပဖို. တနှစ်ကျော်ဘဲလိုတော.တာ
ဆိုတော. အချိန်နီးနေပါပြီ ။
ဒီအချိန်မှာ လုပ်သင်.တာ ၊ ဖြတ်သင်.တာဖြတ်ပြီးရွေးကောက်ပွဲ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေ၊ ပွင်.လင်းမြင်သာမှုအတွက်
စီစဉ်ထားရှိမှု၊ နိုင်ငံတကာစောင်.ကြည်.ရေးအဖွဲ.တွေလာရောက်နိုင်မှုတွေကို မိမိတို. ဂုဏ်သိက္ခာနဲ.အညီ
ရွေးကောက်ပွဲ ကြီးကို ကျားမြီးဆွဲရတော.မယ်.ပုံမျိုး(ကျားမြီးဆွဲရတော.မယ်.ပုံမျိုး)
တွန်.ဆုတ် တွန်.ဆုတ် နဲ. ကြောက်လန်.နေတာ
ပါတီအသီးသီးရဲ. ရွေးကောက်ပွဲ အတွက် ပြင်ဆင်မှု
ဆိုတာ အနည်းဆုံး အချိန် ၁ နှစ်ခွဲ လောက်လိုပါတယ် ။
ပြီးတော. နိုင်ငံတကာကလေးစားတဲ. နိုဘယ်ငြိမ်းချမ်းရေးဆုရှင် * ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် * ကို ရွေးကောက်ပွဲ ၀င်
ရန် မသင်. ... လုပ်လိုက်ရင် နိုင်ငံတကာရဲ. အလယ်မှာ ကြံ.ခိုင်ရေးပါတီဟာ
သိုးမည်း တကောင်ဖြစ်သွားမှာကိုလည်းသတိပြုသင်.တယ် ။